Ny fandrahoana mofo misy proteinina dia mora be
Ny mofo dia iray amin'ny sakafontsika ary atolotra amin'ny karazan-karazany rehetra. Ireto karazana fihenjanana rehetra ireto dia misy zavatra itovizany, feno gliosida izy ireo. Tsy dia toy izany ny mofo proteinina, izay no antony mahasolo ny mofo mahazatra ary heverina fa manampy anao hihena. Fa inona marina no ao amin'ny mofo fitaizam-bolo ary inona no tombony ananany noho ny entana namboarina?
Inona no atao amin'ny mofo proteinina?
Ny mofo mifangaro mahazatra dia vita amin'ny lafarinina varimbazaha, masirasira, rano ary sira ary misy karibonetra 45%, proteinina 7% ary tavy 1%. Ny proteinina proteinina dia misy lafarinina kely, fa varimbazaha, lupine ary proteinina soja marobe ary voan-flax, bran azo hanina, sakafo soja na koba soja Ny atin'ny gliosida dia 7% ihany, fa misy proteinina legioma 25% sy tavy 10%.
Mofo proteinina - © PhotoSG / Adobe Stock
Inona avy ireo tombony sy fatiantoka entin'ny mofo proteinina raha ampitahaina amin'ny mofo mahazatra?
Ho an'ny olona maro, ny sombi-mofo dia ampahany amin'ny sakafony isan'andro, fa izay te hihena kosa dia amporisihina hisoroka gliosida, indrindra amin'ny hariva. Ambonin'ny zava-drehetra, ny antsoina hoe "diet Slim-habang-torimaso" dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fampifangaroana sakafo, izay mamela ny gliosida amin'ny maraina fa mandrara ny proteinina ary mandrara ny fihinanana gliosida amin'ny hariva ary mamela proteinina. Satria ny ankamaroan'ny olona tia mofo dia sarotra ny manao raha tsy misy ny sombin-tsakafo hariva, safidy azo atao tsara eto ny mofo proteinina.
Ny fifindrana amin'ny mofo proteinina dia mety hanampy ny diabeta hisoroka ny fitomboan'ny siramamy amin'ny ra be loatra. Ny proteinina 100 grama dia tsy manana afa-tsy mofo 0,4 - 0,7 monja, miaraka amin'ny mofo mahazatra dia efatra. Satria manome hery be dia be koa ny variana misy proteinina, dia mety amin'ny atleta koa izany.
Satria ny antsasaky ny filan'ny fibre isan'andro dia rakotry ny mofo proteinina 100 grama, dia afaka mandray anjara lehibe koa amin'ny fitazonana ny fahasalaman'ny lalan-dra mandevon-kanina.
Ny mofo proteinina dia maharatsy kokoa noho ny karazan-mofo hafa raha ny tavy misy ny tavy, izay avo lavitra kokoa eto ary mampitombo ny kaloria. Ny sombin-mofo vita amin'ny roye wholéealie dia manana kaloria 80 eo ho eo, fa ny ampahan'ny mofo proteinina kosa dia manana kaloria 100.
Ireo mitandrina ny allergy izay tsy mahazaka gluten dia tsy maintsy mitandrina ihany koa, satria ny mofo proteinina dia misy gluten betsaka, fa ny karazany tsy misy gluten dia efa misy. Noho ny habetsahan'ny proteinina avo dia tsy maintsy mitandrina ihany koa ny olona voan'ny metabolika na aretin'ny voa, satria ny proteinina be loatra dia mametraka adin-tsaina amin'ny voa.
Ny mofo proteinina ihany koa dia ambany noho ny karazany mahazatra amin'ny resaka vidiny, satria lafo kokoa io. Ny kilao iray dia mitentina enina euro eo ho eo. Na ny mixing vita fanomanana efa vonona aza matetika dia tsy safidy mora vidy kokoa.
Raha te-hihary vola ianao na te ho azo antoka tanteraka izay ao anaty mofo proteinina dia azonao atao ny manamboatra azy io. Tsy sarotra izany ary mandeha toy ny taloha ihany.
Ireto manaraka ireto dia takiana:
Lafarinina feno tsipelina 2 sotrokely
Amandy an-tany 100g
Flasse 100g torotoro
Vovoka fanaovana fonosana 1 fonosana
Vary varimbazaha 50 grama
1 TL sira
300g quark (haavo mahia)
Manosotra lapoaly na apetaho amin'ny taratasy fanaovan-tsakafo ary arotsaho ny lafaoro. Hafanana ambony sy ambany: 175 °, rivotra miodina: 150 °.
Afangaroy ny lafarinina, ny amandy, ny flaxseed, ny vovo-mofo, ny vovo-trondro ary ny sira. Arotsahy avy eo ny atody fotsy sy ny quark ary ampidiro ho lasa koba malama.
Araraka ao anaty vilany mofo voaomana ny koba ary atsaho amin'ny lafaoro eo amin'ny talantalana afovoany mandritra ny 50 - 60 minitra ny koba. Vonona ny mofo rehefa tsy miraikitra intsony ny koba rehefa manoto amin'ny hazo na fork. Avy eo avelao hangatsiaka ao anaty lapoaly ny mofo mandritra ny ampahefatry ny ora ary avadiho tsara.
Koa satria ny mofo proteinina dia manimba haingana kokoa noho ny karazany hafa noho ny fangaro ao aminy, dia tsara ny manapaka azy io ho tapatapaka sy manalefaka ny ampahany ilaina raha ilaina izany.
Manana fanontaniana, sosokevitra na fanakianana momba ny fanaovan-mofo ve ianao? Aza misalasala mifandray aminay!
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 18. May 2021 15. Jolay 2021 Sokajy mihinana sy misotro, fahasalamanaKeywords mofo, fanaova mofo, Eisweissbrot, Mofo proteinina, sakafo, sakafo mahasalama, mihinana salama kokoa
Ein Gedanke zu „Eiweißbrot backen – gesunde Ernährung“
Jasmine Hewitt hoy izy:
14 Jolay 2021 amin'ny 15:41 alina
I have never tried this before. I will now!
indray Lahatsoratra taloha: Fitsangatsanganana amin'ny fialan-tsasatra | Aiza no handeha hanao vakansy
more Lahatsoratra manaraka: Mamaky tantara an-tsary - tantara an-tsary ataon'ny ankizy